हातमा बन्दुक बोक्दै किन न्यूयोर्क शहर घुमे नवाजुद्दीन ?
सोमबार, असार ११, २०७५
बलिउड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहिले अमेरिकामा छन्। उनी त्यहाँ भएपनि भारतमा झैं लुंगी लगाएर र हातमा बन्दुक बोकेर घुमिरहेका पाइएको समाचारमाध्यमले जनाएका छन्। एक अवार्ड कार्यक्रममा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेका उनी लुंगी, चस्मा लगाएर एक हातमा बन्दुक र अर्कोमा एक बट्टा बोकेर त्यहाँको सडकमा निस्केका थिए।
भारतीय समाचारमाध्यमले उल्लेख गरेअनुसार उनको यो ‘लुक्स’ मा सबैको ध्यानाकर्षण भएको थियो। नवाज आफ्नो आगामी फिल्म ‘बाबूमोशाय बन्दुकबाज’ को ट्रेलरमा पनि यही लुक्समा पुगेका थिए। फिल्मको प्रचारको मौका नछाडी उनी न्यूयोर्कमा पनि यही हुलियामा घुमेका हुन्।
उनले यो भ्रमणमा आफ्ना फ्यानहरुसँग पनि समय विताए। उनी फ्यानसँग सेल्फी लिदैं र कुराकानी गर्दै हिँडका थिए। ‘बाबूमोशाय बन्दुकबाज’ को प्रचारका लागि नवाजले कुनै मौका छाडेका छैनन्। यसैको सुटिङ जारी छ। हालै रिलीज भएको श्रीदेवीको फिल्म ‘मम’ मा नवाजको अभिनय निकै मनपराइएको छ।
[caption id="" align="alignnone" width="400"] आफ्नो आगामी फिल्म 'बाबूमोशाय बन्दुकबाज' को प्रचारका लागि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नवाजुद्दीन सिद्दिकी।[/caption]
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १, २०७४, ०४:२४:४४
मौलिक हकसम्बन्धी कानून अझै संसदमा पुगेन
बाजेको सेकुवामा तालाबन्दीले जन्माएको कानुनी प्रश्न
‘छोरीको मनोबल बढाऔं, नतिजामा परिवर्तन आउँछ’
मावि शिक्षकको रिक्त पदमा दरखास्त दिन दश महिने तालिमले नछेक्ने
'हामीलाई विमानस्थल हैन खेतसम्म पानी लैजाने कुलो चाहिएको छ'
'प्याडम्यान' आउने पक्का ; नेपालले दियो ८० लाख एमजी
के सलमानसँग 'रेस ३' खेल्दैछिन् यी नेपाली अभिनेत्री?
सुनिलसँगको झगडाबारे पहिलोपटक खुलेर बोले कपिल
सलमान र लूलियाबीचको प्रेममा फेरि आइन् कट्रिना
कविताः ढुङ्गा मुक्ति गौतम